Забур 4 CARS - Nnwom 4 ASCB
1Sɛ mesu frɛ wo a, gye me so,
Ao, me tenenee Onyankopɔn.
Ma me ahomegyeɛ wɔ mʼahohia mu;
hunu me mmɔbɔ na tie me mpaeɛbɔ.
2Ao mmarima, ɛnkɔsi da bɛn na mo bɛdane mʼanimuonyam ahohora?
Ɛnkɔsi da bɛn na mobɛdɔ nneɛma hunu na moadi ahoni huhuo akyi?
3Hunu sɛ Awurade ayi deɛ ɔwɔ nyamesu ama ne ho;
Awurade bɛtie, sɛ mesu mefrɛ no a.
4Mo bo fu a, monnyɛ bɔne;
sɛ modeda mo mpa so a,
monyɛ komm na monhwehwɛ mo akoma mu.
5Mommɔ afɔdeɛ a ɛfata
na momfa mo werɛ nhyɛ Awurade mu.
6Nnipa bebree bisa sɛ:
“Hwan na ɔbɛtumi ayɛ yɛn adɔeɛ?”
Ao Awurade, ma wʼanim hann no nhyerɛn yɛn so.
7Wode anigyeɛ mmorosoɔ ahyɛ mʼakoma ma
asene ɛberɛ a wɔn aburoo ne nsã foforɔ abu so no.
8Mɛtɔ hɔ, na mada asomdwoeɛ mu,
ɛfiri sɛ, wo nko ara, Ao Awurade,
na woma metena asomdwoeɛ mu.
ASCB : Nnwom 4